डिसीमा भयवादी साहित्यिक धाराका अभियन्ता एवं श्रस्टा देश सुब्बासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
राष्ट्रिय सभाका सांसदको भाग्य फैसला आज, यसरी हुने गोलाप्रथा
डिसीमा भयवादी साहित्यिक धाराका अभियन्ता एवं श्रस्टा देश सुब्बासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
आइतवार, मंसिर २६, २०७३
वाशिंगटन डी​​सी । नेपाल धरान घर भै हाल लामो समय देखि हंगकंग बस्नु हुने भयवादी साहित्यिक धाराका अभियन्ता एवं श्रस्टा देश सुब्बासँग डीसीमाँ अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अमेरिकाको बिभिन्न राज्यहरुमा बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुदै वाशिंगटन डीसी आई पुगेका सुब्बासँग डीसी महानगर क्षेत्रमा बिभिन्न पेसामा समलग्न ब्यक्तिहरुको पहलमा उक्त कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा आसन ग्रहण तथा अन्य औपचारिक कार्यक्रमलाई थाती राख्दै भयवादी साहित्यिक धाराका अभियन्ता हर्ष सुब्बलाई मन्तब्य राख्न दिइएको थियो । सुब्बाले आफ्नी मन्तब्य बिस्तृतसँग राखेका थिए भने मन्तब्यपछि केहि जिज्ञासासमेत राखिएको थियो ।
मन्तब्य क्रममा सुब्बाले धेरै शक्तिशाली अध्यारोलाई छोडेर उज्यालो तर्फ गए झै चर्चा गर्दै तर बैज्ञानिकहरुले अध्यारोलाई महत्व दिई रहेको बताए । उनले उज्यालोलाई महत्व दिए जस्तै भयलाई छोडेर आदिम कालीन देखि आएको बताए ।
उनले फेरि भयलाई हामीले अविस्कार नगरेको भन्दै तर वादलाई जोडेको प्रसंग निकाले भने भय कसरी हुन्छ ? कहा हुन्छ भन्ने चर्चा नगरी कन बृहत् रुपमा उनले चर्चा सुरु गरे ?
कुन कुरालाई उठान गर्दा बिस्वमा स्थापना हुन सक्छ ?आधुनिक काल र मध्य कालले पनि छोडेको छ र त्यही कुरालाई उठाउँदा स्थापित हुन सक्छौ भने ?
र यसरी छोडिएको कुरा उठाउनु पर्ने मेरो मान्यता रहेको बताय । उनले एक शक्तिले अर्को शक्तिलाई दबाउने हुन्छ भन्दै त्यहाँ पनि भय भएर त्यस्तो भएको बताए ।
कसैमा रहेको डरलाई पहिला हटाउनु पर्छ त्यो हटेमा उसले आफ्नो कुरा भन्ने बताए । त्यों भयपछि मात्रा समस्याका समाधानका बाटाहरु निस्कने बताए । सुब्बाले थुप्रै उदाहरण सहित भयबादका सिद्धांत तथा अन्य बिषयमा बोलेका थिए ।
कार्यक्रमको संयोजन साहित्यकार तथा लेखक लेखनाथ भंडारी लगायत अन्यले गरेका थिए । कार्यक्रममा भंडारीले स्वागत गर्दै कार्यक्रम बारेमा बोलेका थिए ।
वाशिंगटन डिसी । मिस नेपाल यूएस २०१८ को लागि आधिकार...
काठमाडौं । कतारी अदालतले नेपाली नागरिक अनिल चौधरील...
काठमाडौँ । साझा सबाल मिडियाले बैदेशिक रोजगारलाई लक...
काठमाडौँ । तनहुँमा जन्मेर अमेरिकामा बसोबास गर्द...